Jeff Williams: "Baadhis la'aanta jirka jirka bini'aadamka waa caqabad aan caadi aheyn" | Wararka IPhone
Jeff Williams: "Baadhis la'aanta jidhka bini'aadamka waa caqabad aan caadi ahayn"
Warka la xiriira goobta caafimaadka agagaarka aaladaha Apple ayaa tagay ku jira crescendo sanadihii la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, aaladda sida weyn ugu koray arrintan waa Apple Watch, aalad isku dheelitiran oo kasbatay taxane tiknoolaji ah iyo xirfado ka dhigaya mid ka mid ah smartwatches-ka ugu shaqada badan suuqa. Wareysi lala yeeshay madaxa howlgalka Apple, Jeff Williams, wuxuu taas ku xaqiijinayaa ma ogeyn awooda Apple Watch ilaa aysan jawaab celin dhab ah ka helin dadka. Wuxuu sidoo kale waji ka sameeyaa saacad ay ku ogaan karto gulukooska iyadoo loo malaynayo ogaanshaha aan faafin waa caqabad aan caadi aheyn.
Mustaqbalka Apple Watch wuxuu ku jiifsan karaa ogaansho aan duullaan ahayn
Ma ahan war si aad u hesho markhaati toddobaadle ah in Apple Watch waxay badbaadisay naf. Waad ku mahadsan tahay waxyaabihii ugu dambeeyay ee farsamada lagu soo kordhiyay, waxaan ku heli karnaa qalab koronto oo dhab ah oo leedh ah dhowr ilbiriqsi gudahood, taas oo uga digi karta isticmaaleha halista wadne xanuunka. Baadhitaankaasi wuxuu muhiim u noqon karaa nolosha dad badan. Ogaanshaha dhicitaanka iyo wicitaan deg deg ah ayaa sidoo kale badbaadiyay nolosha dadka da'da ah qaarkood ee guryahooda. Si kastaba ha noqotee, Apple Watch kuma uusan dhalan inuu diirada saaro caafimaadka, Sida Jeff Williams, sarkaalka hawlgalka Apple, wuxuu faallo ka bixinayaa wareysi uu siiyay Independent:
Warqaddii ugu horreysay ee aan helnay ee ku saabsan badbaadinta qof noloshiisa oo keliya kormeeraha heerka garaaca wadnaha, waan la yaabnay, maxaa yeelay qof kastaa wuu eegi karaa saacadda oo uu heli karaa garaaca wadnihiisa..
Natiijada markhaatigan, waxay timid in lagu daro xirmooyinka horumarinta ee ku wajahan caafimaadka isticmaalaha, xirmooyinka horumarinta ee u saamaxaya soo saarida macluumaadka inay fuliso daraasado isku dhafan oo ku saabsan aqoonsiga hore ee cudurada guud sida Parkinson ama Alzheimers. Thanks to Apple Watch, malaayiin dad ah ayaa ku dhiirrigelin kara inay horumariyaan caafimaadkooda jireed iyada oo loo marayo qalabka ay smartwatch u diyaariso dadka isticmaala. In badan ayaa laga sheegay mustaqbalka saacadda iyo waxa ku saabsan ogaanshaha gulukooska dhiigga adoo adeegsanaya dareemayaal khaas ah. Jeff sidoo kale wuxuu ereyo kooban u hibeeyay daahfurka iyo xanta:
Ogaanshaha soo-gaadhis la'aanta jidhka bini'aadamka waa caqabad aan caadi ahayn. Waad sheegaysaa gulukoos, dadku waxay ka hadlayeen dareenka gulukooska ee aan xasaasiga ahayn muddo tobanaan sano ah. Waxaan aqriyaa sanad walba in qof uu haysto kormeeraha gulukooska ee aan faafin oo diyaar ah. Oo waxa aan kuu sheegi doono ayaa ah inay adag tahay in la ogaado gulukoos markii aad heli karto dheecaanka dhexda, sidaas darteed way ka sii dhib badan tahay in lagu sameeyo sawir-qaadeyaasha. Dabcan waxaan xiiseyneynaa dareemayaal badan mustaqbalka.
Waxaa laga yaabaa in qalabka Apple Watch ee hadda jira waxay fududeyneysaa hagaajinta nolosha dadka marka loo fiiriyo dareeraha cabbiraya gulukooska si aan toos ahayn. Hal-abuurnimo ayaa soo ifbaxaya iyada oo la maal-galiyay oo la baadhay. Waxaan rumeysanahay in Apple ujeedkeedu yahay in lagu hagaajiyo nolosha dadka qalabkooda, laakiin iyada oo aan khatar loo gelin in marin khaldan ay dib uga laaban doonto mashruuc badbaadinaya nolosha kumanaan qof.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Jeff Williams: "Baadhis la'aanta jidhka bini'aadamka waa caqabad aan caadi ahayn"
Wicitaanka Waajibaadka: Mobilka ayaa ugu sarreeya liiska cayaaraha ugu badan ee la soo dejiyey in ka badan 100 waddan
IPhone SE wuxuu imaan lahaa guga 2020 oo leh shaashad 4,7-inji ah